amazon echo 2nd-gen maringe amazon echo dot: ndeipi yaunofanira kutenga?
Kuru Nhau & Ongororo Amazon Echo 2nd-gen maringe neAmazon Echo Dot: Ndeipi yaunofanira kutenga?
Amazon Echo 2nd-gen maringe neAmazon Echo Dot: Ndeipi yaunofanira kutenga?
Kana iwe & apos; tiri pamusika weakachenjera mutauri izvozvi, iwe & maapos; zvirokwazvo mune nzira dzakawanda kupfuura vatengi vakafanana-vakafirwa vaive gore rakapfuura. Icho chikonzero cheicho chiri nyore: Apple, Google, uye mazhinji makambani makuru ehunyanzvi akapinda mumusika aine splash kana ari kuronga kudaro. Heck, kunyangwe inozivikanwa mimhanzi yekushambadzira sevhisi Spotify ine runyerekupe rwakawanda rwekukudziridza mimhanzi-centric smart speaker iri yega, futi.
Nekudaro, kana iwe & apos; uchinyatsofunga nezvekuzviwanira mutauri akangwara, iwe & maapos ungangodaro wakashandisa yakawanda nguva kutsvagisa Amazon & apos; s Alexa-powered zvipo, uye nenzira kwayo - hofori yekutengesa ine hukuru hwakanyanya huvepo mumunda. Vaviri maAmazon & apos; s vakurukuri vakangwara, kureva iyo Echo 2nd-gen uye iyo Echo Spot, vari chaizvo kukoka sarudzo.
Sezvinobvumwa, iwo maviri parizvino ndiwo akanakisa-kutenderedza maspika akangwara muAmazon & apos; s lineup, saka zvine musoro kuti isu & apos; isu tinoda kukubatsira iwe kugadzira pfungwa dzako nekuenzanisa iwo maficha, maficha, uye kukosha kwese kwemari yeese iyo Amazon Echo 2nd-gen uye iyo Echo Spot.
Amazon Echo 2nd-gen
Iyo Amazon Echo ingangodaro iri yekutanga kukwikwidza kune posterchild smart speaker. Yechipiri-gen yejajeti inovandudzika pane yakatangira mune dzimwe nzira dzakawanda, zvinoti nekutamba mutauri mutsva, dhizaini nyowani, uye chitsama chemastaera matsva semachira uye veneers ehuni anozorega vatengi vachifananidza gadget neiyo yakazara chimiro chemukati memba yavo. Iyo & apos; yechinyakare smart mutauri mune imwe pfungwa yekuti inovavarira kuve yako-yekumira shopu kune ese smart-mutauri ane hukama bhizinesi. Pamwe chinonyanya kunakidza cheEcho mutauri wayo muhombe pamwe nekugadziriswa kwaDolby kunoita kuti zvionekwe pakati pevanyanzvi veAmazon & apos;
Iyo Echo Do, kune rimwe divi, inonyanya kufanana neiyo huru Echo asi inowanzoitirwa senge sidekick smart speaker kune mamwe makamuri uko mutauri wako mukuru weEcho asingakwanise & apos. Nekudaro, iyo & apos; zvakachengeteka kutaura kuti chinangwa chikuru cheEcho Dot ndechekungowedzera Alexa & apos; s kufukidza mumba mako, asi chokwadika, ichiri kugona kushandiswa seyakazvimirira mutauri akangwara. Nekudaro, kana izvo & apos; s kesi, vatengi vanofanirwa kungwarira kuti iyo Dot ishoma pane ine simba mimhanzi inoridza sezvo zvasvika kune Hardware zvakanyanya. Inoshaya mutauri muhombe neDolby kugadzirisa manzwi emazwi uye simba bass mhinduro iyo iyo Amazon Echo inoshandisa uye nekudaro haina kunyanya kufadza kana zvasvika pakutamba kwemimhanzi.
Zorora uine chokwadi chekuti ingave iyo Echo 2nd-gen uye iyo Echo Dot inoshanda neinenge chero chero smartphone kana yakakurumbira yakabatana imba yekushandisa iwe yaunogona kuisa maoko ako pamusoro. Chero chinhu chakangwara chinoshandiswa kana IOT sevhisi iyo inokoshesa munyu ine Alexa kusangana, uye isu & apos; d zvakare tinokukurudzira kuti ugare kure nevaya vasingape & apos. Kunyangwe dzimwe mota nyowani dzinoshanda chaizvo ne Alexa, asi iwo & maapos ndiwo musoro wechimwe chidimbu.
Iine 2.5 'woofer uye 0.6' tweeter, iyo Amazon Echo inogadzira yakakura mimhanzi ruzivo uye ndiyo inomira mutauri akangwara muAmazon & apos; s arsenal yechikonzero. Nekudaro, ine runyorwa rurefu rwezvinhu, zvinonzi intuitive control yakamisirwa kumusoro chaiko, mutsara-ne3.5 mm tambo kana Bluetooth, mimhanzi inoyerera nerubatsiro rweAmazon Music, Spotify, Pandora, nezvimwe, zvemahara zvekudaidzira kuUS, Mexico, neCanada, uye chii chinogona kunyatsotsanangurwa senzvimbo yekuzadza imba.
Iyo munchkin smart speaker ine imwechete 0.6 'mutauri isingazadze imba yako nezwi asi ichave yakanaka zvakakwana kukuzivisa iwe nezve mamiriro ekunze, nhau, uye kupindura chero mubvunzo waungave uine. Kunze kwekukura kwespika, iyo Echo Dot yakafanana neyakajairwa Echo maererano nezvinhu: ichine intuitive control yakamisirwa kumusoro chaiko, mutsara-kunze ne3.5 mm tambo kana Bluetooth, mimhanzi inoyerera nerubatsiro rweAmazon Music, Spotify , Pandora, nezvimwe, zvemahara zvekudaidzira kuUS, Mexico, neCanada, uye ... izvo & maapos nezvazvo.
Kana zvasvika pakuumbwa kwese, isu tinofanirwa kuzvipa iyo Echo 2nd-gen, iyo & apos ndiyo sisitimu yakanyanya kushevedzera yevaviri, kwete chete nekuti inobvumidza nzira yekuwedzera maitiro, asi zvakare nekuti yakagadzirirwa kuzvikudza inoratidzwa mumba mako. Iyo jira rakasiyana uye matanda ekupedzisa kesi anowanikwa zvakasiyana ndeye kubheja kwakachengeteka kwekuti yako nyowani Amazon Echo ichawana yayo yakakodzera nzvimbo mune yakokumbakunyangwe zvine chimiro chemukati. Nepo madhiraivhu ari pamusoro pegajeti ari akakurumbira, havangade kuba uye havazombo tarisa zvinotyisa kunze kwenzvimbo kunyangwe paunoisa smart speaker.
Zvichakadaro, iyo diki diki Echo Dot zvakare ine yayo yakasarudzika yakasarudzika makesi kesi ayo anotendera iwe kuti uenzanise gadget nemukati mako. Isu & apositi tinopokana kuti iyo Echo Dot inoratidzira yazvino uye yakashata maitiro uye nekudaro haina & apos; haizvirumbidze chero masitayera ehuni, neakanyanya 'anochengetedza' anowanikwa kuve akasiyana ematehwe.
Panguva yekunyora, iyo Echo inoenda ne $ 84.99, asi inowanzo tengesa $ 99. Unofanira kuitora here iyi? Ehezve, asi chete kana iwe usingakwanise kurarama pasina mimhanzi ine ruzha sezvo setup yemutauri yeEcho ndiyo nzvimbo yayo huru yekutengesa. Kune kumwe kumwe kushandiswa, enda kune iyo Echo Dot, iyo iri chaizvo yakafanana, asi isina simba rine ruzha
Unogona kutenga iyo Amazon Echo 2nd-gen apa
Iyo Amazon Echo Dot inogona kupihwa chete $ 39.99 panguva yekunyora, asi inowanzoenda kune $ 49.99. Izvo & maapos anotengeka kupfuura Echo yenguva dzose nekuda kwechikonzero: iro Dot haringove rinoshamisira kana zvasvika pakuita odhiyo, uye kana mimhanzi ichiita chikamu chikuru muhupenyu hwako hwezuva nezuva, unofanirwa kuenda neAmazon Echo uye ongofunga chete diki mutauri akachenjera seimwe yekuwedzera sidekick yeiyo Alexa ruzivo.
Unogona kutenga iyo Amazon Echo Dot ipo pano
s21 vs iphone 12 pro
t-nhare iphone 12 mini
pa & t kugutsikana kwevatengi
BLU Vivo XI uye BLU Vivo XI + ndiyo mhando & apos; s ekutanga mafoni eVerizon-anozivikanwa
Costco ine inouraya Galaxy S10, Cherechedzo 10+, uye Surface Pro 7 madhiri ari muchitoro cheBlack Chishanu
Iyo Moto Z2 Force Edition & apos; s 'isingaputsike' skrini inogona kukwenya nechigunwe
Maitiro ekuteedzera matsva eApple maapplication ausina kuwana & iwe kubva kuchitoro cheGoogle Play
T-Mobile 5G network mepu yekuvhara: ndeapi maguta akafukidzwa?
Yakanakisa S Pen mapurogiramu eGlass Note 9 uye iyo Galaxy Tab S4
Fitbit Charge 3 inopfeka inotanga kutumira vhiki ino, Special Edition iri kuuya mwedzi unouya
Yakanakisa Galaxy S6 Edge + kesi
Vamwe 5G iPhone 12 vatengi vangangoda kuchinjira kuT-Mobile
Akanakisa kickstand makesi eSamsung Galaxy S7 kumucheto